चाहे मन्त्री पद जाअाेस कर्मचारीको दादागिरी तोड्छु : लालबाबु पण्डित| Nepal Pati
स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपाएको भन्दै संघिय सरकार प्रति गुनासो गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । अहिले कर्मचारी समायोजनका लागि नयाँ ऐन २०७४ ल्याउने तयारी सरकारले थालेको छ । कर्मचारी समायोजनमा परेको अप्ठ्यारोबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग गरिएको छोटो कुराकानी ।
अहिलेसम्म स्थानिय र प्रदेश सरकारले कर्मचारी पाउन सकेनन् किन ?
यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो भएका कर्मचारी सम्बन्धीत क्षेत्रमा जानै मान्दैनन । कतै कर्मचारी थुप्रीएका छन् । कतै कम छन् । दोस्रो कुरा कर्मचारी नै कम छन् । त्यसलाई परिपूर्ती गर्नुपर्छ ।
जानै नमान्ने कर्मचारीलाई सरकारले पठाउन सक्दैन ?
कर्मचारीभित्र ठूलो राजनीति र सिण्डिकेट छ । ट्रेडयुनियनका नाममा एक किसिमको दादागिरी देखिन्छ । म बर्षौदेखि मन्त्रालयमा काम गरिरहेका अहिले किन बाहिर जाने भन्दै उल्टै हप्कीदप्की गर्न खोज्छन् । म त्यसलाई तोड्न खोजिरहेको छु । कर्मचारी खटनपटन र सरुवामा शत प्रतिशत निश्पक्ष गर्न खोजिरहेको छु । खटाएको ठाउँमा राष्ट्रसेवकले काम गर्नै पर्छ । ट्रेड यूनियनलाई सरुवामा संलग्न हुन दिएको छैन ।
जान नमान्ने कर्मचारी कुन मन्त्रालयका बढी छन् ?
सबै मन्त्रालयमा छन् । सबै भन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयमा छन् । चार सय कर्मचारी विना काममा जागिर खाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरमा आबश्यकता भन्दा दुईगुणा बढी कर्मचारी छन् । संसदमा पनि त्यस्तै छ । अब जो जान मान्दैन जान बाध्य हुने गरि नियमावली ल्याइदैछ ।
भनेको जसले जान मानेन उसले जागिर गुमाउनु पर्छ ?
त्यो पनि पर्न सक्छ । पहिलो उनीहरुलाई सेवा सुविधा तलबमा समेत समायोजन गरेर पठाइनेछ । त्यति गर्दा पनि जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुनेछ । निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।
जान नमान्नुको कारण चै के रहेछ ?
केन्द्रिकृत मानसिकताकाे कारण अधिकाश निजामती कर्मचारीले काठमाडौँ र सुगम स्थान छोड्न मान्दैनन । काम गर्ने बानी हटिसकेको छ । काम नगरि, मन्त्रालय चारेर, नेताकोमा धाएर तलब खान पाएपछि किन जाने जिल्लामा ? म आएका बेला खटाइएका २० प्रतिशतले मात्रै चिठ्ठी बुझेका थिए । बाँकीले त चिठ्ठी नै बुझ्न मानेका थिएनन । चिठ्ठी बुझेका पनि जिल्ला नगएका कति कति । अहिले त्यसलाई तोडिएको छ । अब विस्तारै अरु पनि तोडिन्छ ।
अनाबश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै तपाईकै जागिर खाइदेलान नी फेरि ?
म डराउदिन । मेरो विरुद्ध कुन मन्त्रीलाई के- के भन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पनि चुक्ली लगाउँछन् भन्ने सुनेको छु । चाहे मन्त्री पद छोड्नु परोस म कर्मचारी प्रशासन सुधार्छु । स्थानिय तहमा कर्मचारी पठाउँछु । जो जान मान्दैन, उसको दादागिरी पनि तोड्छु ।
कहिलेसम्म समायोजनको काम सकिन्छ ?
कर्मचारी समायोजनको आधार तयार भएकाेले आगामी पुस मसान्त सम्ममा समायोजनको काम सकिने छ । म अहिले रात दिन त्यसमा नै लागि रहेको छु । हरेक दिन मेरो मन्त्रालयका कर्मचारी खटन पटनमा नै कुनै न कुनै समस्या आइ नै रहन्छ । निजामती सेवामा दरबन्दीमै रहेका तीन हजार ९०० भन्दा बढी कर्मचारीले के–काम गरिरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड पनि छैन । त्यसलाई पनि खोजी गर्ने काम सुरु भएको छ ।